Bakhala ngezindleko abamakilabhu eMotsepe - Ilanga News
Home Amathenda Bakhala ngezindleko abamakilabhu eMotsepe
Bakhokha izibonelelo zabadlali nerenti yama-clubhouse
KUSHAYE kwezelwa kubaphathi bamakilabhu adlala kwiSafa KwaZulu-Natal ABC Motsepe League ukuvalwa kwezwe ngemuva kokubhebhetheka kweCovid-19 kuleli.
Izwe liqale ukugonqa ngasekupheleni kukaNdasa (March) njengoba kulindeleke ukuba kuxegiswe kancane eminye imithetho kusuka kusasa ngoLwesihlanu. Nokho abezemidlalo basazoqhubeka nokuhlala emakhaya njengoba bengeke bavunyelwe ukubuyela ezinkundleni kwazise leli gciwane lisabalala kakhulu ngokuhlangana kwabantu abaningi.
UThabani Khoza ongomunye wabanikazi beKwaDabeka Sporting ebisempini yokususa uMvoti FC oqhwakele kwi-log yalesi sigaba, utshele ILANGA ukuthi kugadle kwezwela kubona ukuvalwa kwezwe kwazise bayaphoqeleka ukuqhubeka nokukhokha irenti endaweni obekuhlala kuyona abadlali ukuze bangaxoshwa uma sekuvulwe izwe.
Uqhube ngokuthi basaqhubeka nokubabonelela nangemali abadlali babo ekupheleni kwenyanga ukuze bakwazi ukuphilisa imindeni yabo.
Ukhale kakhulu ngokungabi nalo ulwazi lokuthi ngabe kuqhubekani kwiSafa njengoba kungekho lutho abaluthola kule nhlangano ukubazisa ngezinhlelo zangomuso.
“Ngenhlanhla abadlali bami kudala ngabexwayisa ngobumqoka bokonga imali, bangayidli bume. Abangilalela kabazisoli kulesi sikhathi esibhekene naso. Njengoba iphela nje inyanga ngizokwazi ukubabonelela ngemali,” esho.
Uqhube ngokuthi bagqugquzele abadlali ukuba bazivocavoce njengoba besemakubo. Uthi abadlali bayabathumelela ama-video bekhombisa ngabakwenzile.
UBonginhlanhla “Mdlovu” Gwala ongumnikazi woMvoti FC, uhambe emazwini kaKhoza ethi kubakhinyabeze kakhulu ukusabalala kwalesi sifo esikhathini lapho bese bebheke empumelelweni.
Phela bese kusele imidlalo ewu-6 kuphele isizini. Uthi bazolinda isinqumo seSafa kodwa impilo iyaqhubeka. Uthi ithimba labaqeqeshi libanikile abadlali umsebenzi okumele bawenze nakuba kungelula ukubabona siqu.
“Kusishaye kakhulu ukuma kwemidlalo. Nokho kumqoka ukuba sikwazi ukubhekana nalesi sikhathi ngempumelelo. Besingakulindele nhlobo lokhu okwenzekile,” kusho uGwala osame isibindi sokuqeda esicongweni uma sekuvulwe izwe.
Previous articleIngwazi yeMan United iveza umbono ngeye-EPL
Next articleI-WA INIKELE NGESIZUMBULU KUBASUBATHI